သောသီခို: ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း (၁၈) ရေမလွှမ်းပေမယ့်မြေလွှမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် "ရွှေမန်း" ဗဟိုပြုနိုင်ငံရေး၏ကျဆုံးခန်း
ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း (၁၈) ရေမလွှမ်းပေမယ့်မြေလွှမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် "ရွှေမန်း" ဗဟိုပြုနိုင်ငံရေး၏ကျဆုံးခန်း
(KNU/KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PCနှင့် RCSS) တို့၏ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် “လွတ်လပ်မှု၊တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးပင်လုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အညီဒီမိုကရေစီရေး၊အမျိုးသားတန်းတူရေး
နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများ၊အာမခံချက်များအပြည့်အ၀ရှိသောဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအာမခံချက်များနှင့်ကတိပြုချက်များရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်”ဟုပါရှိကြောင်းသိရသည်။ယင်းမှာအတည်ပြုမူကြမ်းအခန်း (၁) အပိုဒ်(၁)(က) ကိုရည်ညွှန်းပုံရသည်။
ပုံအောက်တွင်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်ဟုပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်း၊တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၁၄) ခုတွင်လွှတ်တော်၊အစိုးရနှင့်တရားစီရင်ရေးယန္တရားများအသီးသီးဖွဲ့စည်းပေးထားခြင်းတို့အားမီးမောင်းထိုးပြကာလက်ရှိမြန်မာစစ်အစိုးရကနိုင်ငံတကာတွင်ရှင်းပြလျှက်ရှိသည်။၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟူသည်မှာကျွဲချိုမှနွားနို့ထွက်လာအောင်ညှစ်နေသလိုသာဖြစ်ပါမည်။၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းပြင်၍မရနိုင်တော့ပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်လက်တွေ့ကြိုးပမ်းမှုများအရာမထင်ဖြစ်မှုကိုကြည့်ရှုကာအများစုကြီးကလက်ခံလာကြရပါပြီ။
အကယ်၍အဆိုပါအခန်း (၁) အပိုဒ်(၁)(က) တွင်အောက်ပါစာသားမျိုးကိုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုပေးမည်ဆိုပါ
ရှိသော (မြန်မာပြည်နယ်အပါအ၀င်) အမျိုးသားပြည်နယ်များကိုသာအခြေခံ၍ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု
သို့ဖြစ်၍တဖွဲ့ခြင်း (သို့မဟုတ်) အစုငယ်တစုအနေဖြင့်သာမြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်နှစ်ပါးသွားရန်ကြိုးပမ်း
ခဲ့သည်။ကရင်သုံးဖွဲ့နှင့်ရှမ်းတဖွဲ့တို့ကလက်မှတ်ထိုးမည်ဟုကြေငြာချက်များထွက်ပေါ်လာပြီးမရှေးမနှောင်းသြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့ မှာပင် နေပြည်တော်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အန်ဒရူးပတ်ထရစ် နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ကာချုပ်
မင်းအောင်လှိုင်က အောက်ပါစကားကို ထပ်ပြောကြောင်း ကြားသိရသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ် လိုလားစိတ် ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီးပါကလည်း ဥပဒေနှင့် အညီသွားဖို့ ဆန္ဒရှိရန်လိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီးနောက် လက်နက်များ စွဲကိုင်ထား၍ မရကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ NCA လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးပါက DDR၊ SSR လုပ်ငန်းစဉ်များကို မဖြစ်မနေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို လက်ခံသည်ဆိုပြီး လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို မစွန့်လွှတ်၍ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ လက်နက်ကိုင်သည့် စနစ်ကိုသာ သွားရမည်ဖြစ်တယ်။”
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ များအား ဖြစ်နိုင်လျှင် လက်နက်ချခိုင်းရေး၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ၄င်းတို့ ဖိနပ် အောက်သို့ ဒူးထောက်ကာ ခိုင်းတာလုပ်ရမည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ စေရေးမှ လွဲ၍ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း သစ်များတွင် အခြားမူဝါဒစိုးစဉ်းမျှမရှိ။ မောင်ချစ်သူ ခေါင်းဆောင်သည့် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်သည် မြန်မာစစ်အစိုး
ရကို သစ္စာခံကာ ကရင်ကို ကရင်ချင်းသတ်ပြလိုက်သည်။ သို့ ဖြင့် ၄င်းသည် အရှင်မွေး၊နေ့ ခြင်းကြီးကာ ဓါးထက်နေပြီ
ဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးဆင်နွှဲခဲ့သည့် အာရှလမ်းမကြီးတိုက်ပွဲတွင်တွေ့ လိုက်ရသည်။ စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး သမိုင်းအစဉ်အလာရှိခဲ့သည့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအယ်န်အယ်လ်အေ) အား ဤဘ၀မျိုးသို့ မရောက်စေလိုပါ။ ကေအဲန်အယ်လ်အေ၏ အနာဂါတ်အတွက် မည်သို့ မျှရေရာခြင်းမရှိဘဲ လက်မှတ်သွားပြီးထိုးလိုက်ခြင်းသည် ပါးကွက်သားလက်သို့ ဓါးဆက်လိုက်ခြင်းမျိုးသာ
ယင်းသို့ သောနောက်ခံအခြေအနေများအောက်တွင် ကေအဲန်ယူသည် အဘယ်ကြောင့် အလျင်စလို သွား
ရောက်လက်မှတ်ထိုးခြင်နေပါသနည်း။ ဤအခြေအနေသည် ယခု သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် တရားဝင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတော့ မည့် အာရှလမ်းမကြီးနှင့် များ ဆက်စပ်နေပါသလား။ လေ့လာရန်လိုအပ်လာပါသည်။
စစ်အစိုးရ၊ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့နှင့်သာမကအာဆီယံ ASEAN နိုင်ငံများနှင့်ပါဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည့်ယင်းဖြစ်ရပ်အပေါ်တွင်သင်္ခန်းစာယူပြီးနောင်မဖြစ်အောင်မည်သို့ရှောင်ရှား
ကိုဖြတ်ကာ၁၄၀၄၉၇ကီလိုမီတာရှည်လျားသည်။ယင်းလမ်းသည်ကရင်ပြည်နယ်တွင်ကေအဲန်ယူ၏ထိမ်းချုပ်ရာဘားအံခရိုင်တပ်မဟာ (၇) နှင့်တပ်မဟာ (၆) တို့ကိုပိုင်းခြားထားသည်။တပ်မဟာ (၆) ဌာနချုပ်တပ်ဖွဲ့နှင့်၎င်း၏တပ်ရင်း (၁၆) တို့၏ထိမ်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သည်။လမ်းဖေါက်လုပ်ရေးစီမံချက်၏အစပိုင်းတွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တဖွဲ့တည်းသာရှိပြီးထိုဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ကရင်ပြည်နယ်ကို
၂၀၁၂ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင်စစ်အစိုးရနှင့်ကေအင်ယူတို့အပစ်ရပ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေး
ကုမ္ပဏီ (See Sang Karmyotah Co.,Ltd.) အားသင်္ဃန်းညီနောင်၊ကော့ကရိတ်တောင်ခြေပတ်လမ်းသစ်ကိုဆောက်လုပ်ရန်မြန်မာစစ်အစိုး၇ကခွင့်ပြုခဲ့သည်။စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကထဲကပင်ဒေသခံကရင်
၂၀၁၅ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလတွင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးတော့မည့်အာရှလမ်းမ (မြ၀တီ၊ကော့ကရတ်) တောင်ပတ်
နှစ်ဘက်သဘောတူညီမှုရကြမည်ဆိုပါကအတည်ပြုမူကြမ်းအားလက်မှတ်ထိုးပြီးသည့်နေ့ရက်မှာပင်စတင်ဖေါ်ဆောင်ခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သဖြင့်ချက်ခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်ပါသည်။မရရအောင်လည်းဆွေးနွေးသင့်သည်။သို့မှသာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များရှိ၊မြေယာ၊သဘာဝသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များအား (ဗဟိုပြည်ထောင်စုအစိုးရဟူသောအမည်ကိုခံယူလျက်) ၄င်းတို့တဦးတည်းသာထင်သလိုချယ်လှယ်အမြတ်
၄င်းတို့၏နုတ်ကတိစကားများ သက်သက်ကို မယုံကြည်သင့်ပါ။ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းသစ် တဦး သို့ မဟုတ် တချို့ မျှက မိမိတို့ အားလက်သပ်မွေးလိုသဖြင့် ချော့မြူထားခြင်းအပေါ်တွင်လည်း မသာယာသင့်ပါ။ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းသစ် တဦး သို့ မဟုတ် တချို့ မျှကိုသာ ပေါင်းထားသည့် နည်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရလိမ့်
မည်ဟု မမြှော်မှန်းသင့်ပါ။ အားကိုးသင့်သည်မှာ ကရင်လူထုအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီးတရပ်လုံးဖြစ်ပါ
မည်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုများပေါ်လာရေးသည်သာ အခရာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။
သင်္ခန်း စာ နှစ်ခုကို ယူနိုင်ပါသည်။ တခုမှာ ကိုးကန့် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖုန်ကျားရှင်ဖြစ်သည်။ဗိုလ်ခင်ညွန့် 
တံခိုးထွားစဉ်က မြှောက်စားခံခဲ့ရသောအခါ ဖုန်ကြားရှင်အား တကယ့် ကိုးကန့် လူထုခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် အမွှမ်း
တင်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာရှင်အချင်းချင်းအကြားအာဏာလုပွဲဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပြုတ်ကျသွားသောအခါ ဖုန်ကြားရှင်
မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးရာဇာသက်သက်ကြီးအနေဖြင့် လက်ညှိုးထိုးကာ အပြတ်တိုက်ခံခဲ့ရသည်။
အခြားတခုမှာဦးရွှေမန်း၏သာဓကဖြစ်သည်။ "လွှတ်တော်အထက်မှာမိုးကောင်းကင်ဘဲရှိတယ်။" ဟူ၍ကြွေးကြော်ကာတံခိုးထွားခဲ့သည့်လွှတ်တော်ဥက္ကဌဦးရွှေမန်း၏နိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်းသည်နိဂုံးကမ္ပတ်အဆုံးသတ်
မည့်အနေအထားသို့ဦးတည်လျှက်ရှိနေချေပြီ။ဦးသိန်းစိန် နှင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ ဂိုဏ်းက ဦးရွှေမန်းဂိုဏ်းကို အပြုတ်တိုက်ချလိုက်ပါပြီ။ ဦးရွှေမန်းသည် ရုပ်သေးဘ၀ နှင့် ကပြအသုံးတော်ခံရမည့် အနေအထားနှင့်သာ ဘ၀ဆုံး
ဘွယ်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးအာဏာရရန် လမ်းမရှိတော့ပါ။ ဦးရွှေမန်း၏ကျဆုံးခန်းအတွက်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအခြေခံ
စနစ်အားအလုပ်အကြွေးပြုခဲ့သူကိုပင်အာဏာလုပွဲဖြစ်လာသောအခါဦးသိန်းစိန် နှင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်
တို့ ဂိုဏ်းက မထောက်ညှာစတမ်းရိုက်ချပစ်ခဲ့သည်။၄င်းတို့ ဂိုဏ်းသည်လည်း မည်မျှအထိ ညီညွတ်နေမည်ဟု မည်သူမျှမပြောနိုင်ပါ။
ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်တည်ထောင်သူ သြဂုတ်လ (၂၂) ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
Posted by PKD at 5:21 AM
ဦးအောင်မင်းလွတ်တော်တွင် NCA နှင့်ပါတ်သက်၍ ဖြေကြား...
IKO မှ ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Message to Karen Traditional Wrist-tying Ceremony ...
ရွှေမန်း ဗဟိုပြု နိုင်ငံရေးကျဆုံးခန်း (ဘာသာပြန်)
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမျာ...
နိုင်ငံတကာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရူံး မှ KNU သို့အိတ်ဖ...
ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း (၁၈) ရေမလွှမ်းပေမယ့်မြေလွှမ်းေ...
To SD Type the rest of your post here.
(KNU/KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PC နှင့် RCSS) တို့၏ တစ်...
KNU DKBA RCSS ငြိမ်းကောင်စီ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်
A Big Joke Burma (Myanmar) Changing to Democracy
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (၁၅) ကြိမ်မြောက် ...
ဖာပွန်ခရိုင် ၆၅ ကြိမ်မြောက်ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ရုပ်သံမ...
ကျွန်ုပတို့ ရွာသားများအသံတခုတည်းဖြစ် ဘာများဖြစ်လာ...
သံလွင်မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၆ ခု ရပ်တန့်ပေး...
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့၆၅ ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ...
(၆၅) ကြိမ်မြောက် ကရင့်အမျိူးသားအာဇာနည်နေ့ကဗျာပြိ...
ဗိုလ်ချူပ်နယ်ဒါးမြ နှင့် ကွယ်ကလူသတင်းဌာနတွေ့ ဆုံမေ...
ကရင်တမျိူးလုံးချစ်သော စောဘဦးကြီး (ကရင့်အာဇာနည်နေ...
(၆၅) ကြိမ်မြောက် ကရင့်အမျိူးသားအာဇာနည်နေ့KNU ဥက္က...
NCA (၉ )ကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းမျာ...
အန်စီအေက ကျနော်တို့အတွက် အသက်နဲ့တမျှ အရေးကြီးပါတယ်...
ကေအေစီ လူထုတွေ့ဆုံမှုမှ ကရင်မျိုးနွယ်စု ၇စုရှိဟု ကန...